Ubuqotho konompempe buyadingeka bulekelelwe yiVAR - Bayede News
Ubuqotho konompempe buyadingeka bulekelelwe yiVAR
Usuyabuya umgqigqo kaDolly azakhele ngawo udumo ebholeni
Eminyakeni edlule ngingomunye wabantu ababegxeka iVideo Assistant Referee (VAR), okwakwenza ngisho lokho ingoba ngikholelwa ekutheni unobhutshuzwayo umdlalo wamaqili, ngisho nezazi ezindala ziyasho zithi lo mdlalo owamaqili. Ngaphandle kwabadlali enkundleni, kodwa nabaphathi bamaqembu kumele kube ngamaqili.
IVAR ifike nezinkulu izinguquko ebholeni, ngoba ngisho igoli selibaliwe iyakwazi ukuthi unompempe awumise umdlalo ayobheka ithelevishini bese eyasiguqula isinqumo. Ngibone ifike yalibulala ibhola ngoba manje ngisho into encane eyenzekile isiyahamba iyobhekwa.
Kodwa okwenzeke ngeledlule emdlalweni obuphakathi kweGhana neNingizimu Afrika (iBafana Bafana) kungenze ngaguqula umqondo wami ngeVAR. Ngibona ukuthi kumele isetshenziswe emidlalweni emikhulu, efana nawo lo obungeSonto ongowokuhlungela iNdebe YoMhlaba. Kungijabulisile ngibona usebenza emidlalweni yeCAF Champions League yabesifazane.
UNdiaye Maguette (osesithombeni) ongowokudabuka eSenegal uyena olekelele iGhana ekutheni iguqise iNingizimu Afrika ngegoli elilodwa eqandeni, igoli livalelwe phakathi u-Andrew Ayew nokube iphenathi engekho. Ngaphandle kokuthi kuxhoshwe iNingizimu Afrika, kodwa ngimile ekutheni iVAR impela kumele isebenze emdlalweni emikhulu lapha e-Afrika. Isitobha seBafana Bafana uRushine De Ruck akamthintanga nhlobo uDaniel Amartey weGhana, noma kuthiwa umthintile kodwa bengamele kuze kube ukuthi likhonjwa emlotheni.
Okwenziwe uMaguette ukhombise ubuhlathi impela nje, bekumele athole isijeziso esizoba isibonelo kwabanye onompempe abanomcabango ofanayo nowakhe wokuxhopha amanye amazwe noma amaqembu. Njengoba isaqhubeka nje imidlalo yokuhlunga, ngifisa impela ajeziswe.
Ngaphandle kwephenathi ayibekile uMaguette kodwa izinqumo eziningi bezikhombisa ngokusobala ukuthi useka iGhana, ngisho umuntu ongalilandeli ibhola likanobhutshuzwayo ubekubona lokho. UPercy Tau wabanjwa cishe kabili ebhokisini kodwa akazange ayikhombe iphenathi eyayizovuna elakuleli.
Kungichazile okwenziwe inhlangano ephethe unobhutshuzuwayo kuleli iSouth Africa Football Association (SAFA) ukuthi isheshe iluphakamele lolu daba, ngoba impela iNingizimu Afrika ifakwe umunwe ehlweni. Ngethemba ukuthi iSAFA izokuba nobufakazi obuqinile ukuze izokwazi ukuphumelela esicelweni sayo.
UDokotela uPatrice Motsepe ngesikhathi ethula inkulumo yakhe yokuqala njengoMengameli weCAF wakubeka kwacaca ukuthi ufuna ukwenza izinguquko, alwe nenkohlakalo eyenziwa kunobhutshuzwayo lapha e-Afrika. Nalokhu okwenziwe uMaguette ubugebengu, ngoba ubengeke akwenze lokhu akwenzile mahhala kukhona athenjiswe khona akajeze kanzima.
UMaguette abanye sebemkhohliwe kodwa nguye odlalise iMamelodi Sundowns ibhekene ne-Al Ahly emqhudelwaneni ka-2020/21, lowo mdlalo washiya izinkulumo eziningi. Nakulowo mdlalo wayecindezela elakuleli.
Ngaphandle kwezinqumo zikanompempe kodwa nathi lapha eNingizimu Afrika kumele sikufunde ukuthi sizobhekana nobunzima uma sidlala imidlalo yangaphandle. Lokhu sikubonile kwenzeka kuSundowns naku-Orlando Pirates eminyakeni edlule. Kuthi la maqembu uma edlala namaqembu angaphandle umdlalo ulapha eNingizimu Afrika bebalalise ezindaweni zomtakabani, babajimise ezinkundleni ezisezingeni eliphezulu. Kuyothi kuyiwo awakuleli ayangaphandle aphathiswe kwezilwane, alaliswe ehhotela elingekho sezingeni lingayitholi ngisho indawo yokuzivocavoca ngesikhathi. Nalokho kumele kube into ebhekwayo ngabaphathi bakanobhutshuzwayo, ngoba iphambene nomthetho.
Ngifisela iqembu labesifazane leSundowns inhlanhla njengoba lizodlala kumdlalo wamanqamu eCAF Women’s Champions League.
nguSabelo Maphumulo Nov 19, 2021